नर्डिक विभागले युद्धको धम्की दिन्छ
मैले यस भिडियोलाई आज मेसेन्जरमा पठाईयो। मलाई थाहा छैन कि यसलाई कत्ति गम्भीरतापूर्वक लिनु हो। जे भए पनि राजनैतिक पार्टीका सचिव नॉर्डिक शाखा क्रार अल-हमेडेले स्वीडेन डेमोक्र्याट्सले सत्ता लिने बित्तिकै स्वीडेन (गृहयुद्ध) मा युद्धको घोषणा गरे।
भिडियोमा करार अल-हमेडेले बनाएको धम्कीहरू कम्तिमा पनि भयानक भन्न सकिन्छ। यदि पार्टी केवल आफैंमा हुने थियो भने पुलिस र सापोले अझै पनि धम्कीलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ।
नर्डिक विभागको एक वेबसाइट छ जुन फेसबुक र यूट्यूबमा पनि उपलब्ध छ । नर्डिक विभाग तुरुन्त रोक्नु पर्छ। फेसबुक र युट्यूबले खाताहरू रोक्नु अघि कति समय लाग्छ? र वेबसाइट कति लामो रहन सक्छ?
शब्दको लागि युद्ध शब्द को घोषणा